ABO Risaa Tahuu Qaba « QEERROO
ABO erga akka kaayyoo bilisumm ti bu’uraa’ee gara waggaa afurtamaa tahaa jira. Akeeka kana bakkaan gahuuf qaroon ilmaan Oromoo lakkoobsa hin qabne dhiiga isaanii itti lolaasanii lafee isaanii itti tareessanii jiru. Kaayyoo bilisummaa kana irratti ilmaan Oromoo warri dammaqinsa gahaa gaban utuu Kaabaa Kiba , Bahaa Dhiha hin jennee gamtaan wareegama qaalii baasanii darbaniiru. Har’as guca bilisummaa qabatee jiru galmaan gahuuf ilmaan Oromoo kumaataman irratti kitimaa jiru.
Utuu ilmaaan Oromoo qaroo tahan lubbuu isaanii kenanii kaayyoo Bilisummaa kana irratti hin ciccinee sabni Oromoo bakka har’a jiru kana jiraachuu danda’a jennee hin yaadnu. Qabsoon bilisummaa bu’aa bahii guddaa qaba. Beelaa’uu, dheebochuu, dhukkuba adda addan dararmuu, aduun gammoojii keessatti waadamu, bokkaan tumamuu , harka diina itti kufanii waxxalamuu fi isa dhumaa aarsaa tahuutu jira.
Namoota qabsoo keessatti qaamaan quuda fudhatee hin beekneef qabsoon homaa itti hin fakkaatu. Hojiin salphaan akka qabsoo waan hin jirree itti fakkaataa. Warri lola qabsoo akka xapha video godhaanii hubatan illee ni jiru. Yaroo isaan afaan bananii namoota qabsoo kana keessa bara dheera dhamaa ture arabsaan beeyyeen gadaaf. Arabnii fi abaarsii isaanii waan tokko nama miidha jechuuf miti. Utuu yaroo isaanii waan nanummaa isaanii faayyidaa qabu irratti balleessanii bu’aa isaanii qaba. Namni dhalatee jiruu hunduu saba isaa fi biyyaa isaaf waan garii dhalaguu qaba jechuun hin danda’amu. Warri biyyaa fi saba isaaniif dantaa hin qabne jiru. Warra bu’aa mataa isaaniif dhiiga ilmaan Oromoon daldalan bara baraan argaa jirra.
Biyya alaa kana keessaatti namoonni baayyeen hojii manaa kennameef irratti hedduu dadhabaa jiru. Hojii kana eenyu akka isanii kenne waan beekan tokko illee hin jiru. Namotni waan hojjetaa jiran beekanii fi dantaa irraa argatan namoota qubaan lakkawamanii. Irra guddaan isaa caliisee dubbii borcaa jira. Bishaan jalisuun kan mijjaa’uu bakka laafaa tahe irratti. Bakki humna qabu waan darbamaa deemuuf yaroo namaa hin laatu. Yoo karaa irra yaa’u argate inni guddaanis dukkaa irraa lola’a. Diinni keenya, akkuma kana Oromoo keessa warra naannesse ilaalluuf rakkina qabu qabachuudhaan akka qabsson saba keenya of keessatti diina horatu gochuuf yaala isa dhumaa gochaa jira.
Uummatni Oromoo biyya keessa jiru xinaa fi guddaan akka namoo tokkotti lafaa ka’ee yaroo diina isa wajjin du’aa fi ajjeechaa irra jiru maaliif ala kana keessatti ABO fi miseensaota ABO irratti qabsoon haaran banamuun barbaachisaa tahe? Namoota hin beeknee fi kaayyoon ABO balleessuun” itti mula’ata Malaasaa Zeenawii” irra akka dhufaa jiru wal hubachiisuun barbaachisaa dha. Haalli kun tasa lafaa ka’e kan as bahe akka hin taane haa beekannu. Qabsoo uummata Oromoo dhaamsuu fi Oromoo cabsuuf ABO duraan dursee akka baduu qabuu kaleessas , har’as, borus kaayyoo TPLF. ABO balleessuuf TPLF waan hin goone hin jiru. Biyya keessatti duwwaa miti biyyaa olaa keessa deemtee ilmaan Oromoo saba boontota tahan hundaa ajjeessuu fi ukkamsuu irraa yaroo booda jette hin jiru. Ayyaana ABO balleessu tasa iyyuu argachuu hin daneessu. Hiree ABO kan murteessuu danda’u uummata Oromoo bal’aa duwwaa dha. ABO akka namooni yaadaa xixiqaa qaban yaadanii, kan miseensota muraasaa miti. ABO kaayyoo bilisummaa dhiiga ilaamn Oromoon soorame as gahe qabeenya uummata bal’aa Oromoo ti. Gareen tokko illee kan kooti jedhee itti dhaadachuu hin danda’u.
Uummatni Oromoo qabeenya isaa kana akka agartuu ija isaa ti eegachaa jira. Warri utuu hin beekiin hojii diinaa raawwachaa jiru illee utuu irraa of qusate garii dha. Har’a ABO dura dhaabbachuun Wayyeenee wajjin hariiroo galanii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hammeenya isa dhumaa hojjechuu waan taheef gaaf tokko wal nama gaafachiisa. Namni Oromoo gurmuun tahe ijaarame qabsoo saba isaa keessaa qooda fudhachuun akka isaaf taheti waan ifa jiru. Qabsoon godhamu qabu Wayyaanee irratti kan xiyyeefate yoo tahee rakkinni guddaan ilmaan Oromoo jidduu jiraachuu hin danda’u.
ABO qabsoo bara dheeraa gochuu irra darbee sammuu fi laphee uummata Oromoo tahee jira. Qabsoon uummatni Oromoo gochaa jiru uummata naannoo keenya jiraniif qofa utuu hin kan biyya lafaafuu fakkeenya tahaa jira. Uummatni keenya olaantummaan hiree isaa murteefachuu qabsoon gochaa jiru shira diinni nu keessatti facaasaa jiruun uguramuu irra darbee jira.
Akka ijaarsatti ABO yaroo itti olaa fi arba ilmaan tahanii ABO jiban irratti ofuu hin agarre, ykn hin hubatne taha. ABO Risaa Tahuu Qaba. Risaan yoo gara lafaatti gadi siiqe, allaattiin, quroo fi sinbroon hundi wacaa duukaa kaatu. Utuu itti galagalee kaatuu isaan takkaa dhahee hunduu biyyoo tahuu. Risaan garuu isaan loluu hin filatu. Isaan dhiisee ol waaqat ykn samiit bahee balali’a. Hundii isaanii iyyuu akka risaa ol bahanii balali’uuf danddeetti isaa hin qaban. Anaaf filmaatni risaa ol aanaa.
ABO akka ijaarsaa ti haala fokkisaa ala kana keessaa deemaa jiru irraa qoda fudhachuu dhiisuun ni mala.Garuu miseensa ijaarsaa tahanii ykn deegartoota ijaarsaa tahanii warri atakaroo kana keessaa qoda fudhatan yoo jiraantan bu’aa tokko illee akka fidaa hin jirree hubatamuu qaba. Kanaafuu ABO miseensonni isaa fi degartoonni dogongora kana keessa akka qooda hi fudhanne gochuun dhaaba fi qabsoo saba Oromoo ni gargaara. Yaroo, humnii fi qabeenyi keenya qabsoo bilisummaa mirgisiisuu irraa oola. Namootni utuu hin beeknee waan qabsoo saba isaanii miidhuu danda’u irratti boba’an illee suuta suuta hubachuuf ayyaana argatu.
Gadaan Gadaa Bilisommaa Ti!
« Waajjira ABO Godina Lixa Shaggar Magaalaa Jalduu Bara 1991/ Galmee Seenaa
SQ-Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 9,2017 »